About Us - Shanghai Shenyong Line Products Co., Ltd
Shanghai Shenyong Ngokukhethekile okuklama, ukukhiqizwa futhi yokuthengisa komugqa ngamakhasimende kagesi zempi ngocingo. Liphinde lunikeze uchungechunge namasevisi kumakhasimende ethu ezifana ukufakwa, kabusha, ukukhanda kokusiphakamisela imishini mechanical nokwenza umsebenzi wokuvuselela izakhiwo & ukukhanda kagesi imishini elawulwa, ukukhiqizwa futhi yokuthengisa kwezakhiwo, ibhizinisi Consulting, Isigaxa Bump, ukucutshungulwa-trailer izesekeli. Le nkampani emakethe ngamakhasimende kokubili ekhaya aphesheya kanye unikezwe Class Inhlangano yenkampani. It ngokukhethekile ukukhiqizwa umugqa kagesi ezokuxhumana based zempi ngocingo Hank oyi-knotting imikhiqizo elula inoveli chungechunge. Imikhiqizo yethu zisetshenziswa kakhulu zokuxhumana ngocingo, amandla inethiwekhi, gesi.
Sesitimela, futhi fiber-optic ikhebula. Imikhiqizo yethu kufanele izinga lokukhanya, kanzima machining, efakwe kalula futhi kwagezi okuyinto livumela bokuphakama ngawo olunye uhlobo kagesi ezokuxhumana zempi izibopho Angeke uqhathanise.
Le nkampani unikezwe state-of-the-ubuciko imishini namatalenta lobuchwepheshe obuchaza ubuhle, kokuphishekela isitatimende Ukuthunywa "izinga lokuqala, ukwethembeka ophakeme" futhi besekela umoya ibhizinisi 'ubunye & pragmatism, ukunwetshwa & ukuzinikezela ". It ithwala ngokusebenzisa ISO 9001: 2008 Standard ngobuqotho kwenza kanye uhlole ezisekelwe nesikhathi izinga kuze kufinyelele 98% nokwaneliseka amakhasimende 'ngesilinganiso-100% esebenzisa bumbela ngokucophelela, ukuphathwa yesayensi, inkonzo ngobuqotho nokwaneliseka okuqinisekisiwe. Imikhiqizo yethu nezimfuno yokwakha kabusha ukwakhiwa kwenethiwekhi kagesi. Phakathi naleso sikhathi, inkampani ngeke ngcono ikhwalithi imikhiqizo kanye namasevisi njalo ukwanelisa izidingo ezilandelayo imikhuba ngamazwe, ukunikela okungcono eziveza ongumninimandla onke namasevisi kumakhasimende ethu.
Ikheli: No. 85 ShenXu Road, Songjiang District, Shanghai, China